Tonga avy any Mahajanga araka ny fitaka nataon'izy ireo tamin'i Rose i Tsinjo sy i Vania. Namantana tao amin'i Rose hatrany. Nampiadaniny tanteraka na tamin'ny sakafo na tamin'ny fitafiana. Tsy nihafihafy mihitsy. I Rose rahateo, tia manaram-po amin'ny fihinanan-kanina ary efa tena tafahoatra mihitsy aza.